कविताका लागि कला आवश्यक हुन्छ -बद्री भिखारी - Naya Online
नयाँ अन्लाईन आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५ (February 17th, 2019 at 3:10am ) अन्तर्वार्ता, साहित्य
नेपाली साहित्याकाशमा निरन्तर रुपमा सक्रिय रहदै आएका इटहरीका कवि बद्री भिखारीको कविता संग्रह समुद्र – साउती केही समय अघि बजारमा आएको छ । यो कविता कृति बजारमा निक्कै चर्चामा छ । कला र विचारलाई एक साथ संयोजन गर्न मायुर कविका छवि बनाएका भिखारी पछिल्लोे पल्ट एकल कविता वाचन तथा समुद्र –साउतीको चर्चामा निक्कै व्यस्त देखिन्छन् । सो व्यस्तताका बिच कवि भिखारीसँग नयाँ अनलाईनको लागि प्रकाश दिप्सालीले गरेको कुराकानीको अंश ।
हिजोआज के गर्दैहुनुहुन्छ ?
साहित्यभन्दा बाहिर केही गर्दैछु । कलम बोक्ने मानिस कलमसँगै खेल्छ, म पनि त्यही गर्छु । मसँग कलम बाहेक केही त छैन, अरु के गर्नु र खै ?
हिजोको समय र अवकाश पछिको जीवन भोगाईमा कत्तिको फरक हुँदोरैछ ?
फरक हुने गरि न हिजो काम गरेको थिएँ न आज नै गरेको छु । जागिरलाई स्थायी भनिए पनि मैले कहिल्यै स्थायी मानिन । जीवन नै अस्थायी भएको बेला जागिरको के कुरा ? अहिले पनि साथीभाइसँग उस्तै भेटघाट छ उस्तै मित्रता छ । लेख्न छेकेको छैन । अर्को जागिर पनि छँदैछ । फरक छैन ।
समुद्र साउतीदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
समुद्र साउती प्रकाशन भयो ठाउँ ठाउँमा चर्चा भयो । मैले गर्ने कर्तव्य पूरा गरेँ । अब त्यस्कै पछि लाग्दिन । म सन्तुष्ट भएर नै त निकालेको हुँ नि किताब । अब त अरु अपुर्ण छन पूर्ण बनाएर किताब निकाल्न तिर पो लाग्छु । कताको पछि फर्किन्छु त ? पछि फर्केर हेर्न थालियो भने अगाडि जान ढिलो हुन्छ ।
अघि नै आउनु पर्ने कवि धेरै ढिलो आयो भन्छन् नि ?
म त कविताको रुपमा २०३६ सालदेखि र किताबको रुपमा २०४३ देखि नै आइरहेको छु । कसरी ढिलो भो ?
आफ्नो कविता कृर्तिले यो चर्चा पाउँछ जस्तो लागेको थियो ?
पाउनु पर्ने पाइन कि जस्तो लाग्छ । खासमा प्रकाशकले सबै ठाउमा किताब पुर्याउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
यो कृतिबाट बद्री भिखारी बढि कलावादी भयो भन्छन् नी ?
कविता भनेको कथा जस्तो वा उपन्यास जस्तो होइन । कविता र गीतको विशिष्ट स्थान हुन्छ । कला भएन र ठाडो भाषा मात्र भयो भने कविता हुदैन । कविताका लागि कला आवश्यक छ र हुन्छ । पश्चिमा देशमा नेताको भाषण त कविताले भरिएका हुन्छन । अनि हाम्रोमा कवितामा कला थुपारियो भनेर हुन्छ र ? तुरुन्तै बिक्तैनन त्यो अर्कै पाटो हो । किन भने बहुमुल्य बस्तु बिस्तारै बिक्छन् । अँ, कवितामा बिचार गौण हुन्छ र कला प्रमुख हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
एउटा कविको लागि साँच्चै कविता के रै छ ?
लेख्तैछु । जुन दिन कविता भनेको यो रहेछ भनेर बुझ्छु नि सायद कविता प्रतिको मोहभंग हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ । अर्को कुरा मेरो काम कविता लेख्ने हो । कविता के हो भनेर खोज्ने काम अरुको पो हो त !